Gwema i-Scam yaBathengisi ukuba babe ngabathengisi bangebucala
Iimoto neekhekhi Iimoto ezisebenzisiweyo
Gwema i-Craigslist Scam yabaThengisi abaPhezulu njengeziThengisi zaBucala
Benza Oko Ukuphepha I-Federal, Imithetho Yombuso
Kukho umkhwa woCraiglist oqhubekayo kwilizwe lemoto elisetyenzisiweyo elingakuchukumisa. Abadayisi bathengisa imoto njengabantu abazimeleyo ngoko ke akudingeki ukuba bahambisane nemithetho yemoto esetyenzisiweyo yi-Federal Trade Commission yabathengisi bemoto abasetyenzisiweyo.
Awukwazi ukuba uyathenga kumthengisi wemoto esetyenzisiweyo de ukuthengiswa kugqityiwe. Ngokusisiseko. isebenza njengale (kwaye kwenzeke kabini kumhlobo wam kwiminyaka emibili edlulileyo ukusuka kubathengi abahlukeneyo baseConnecticut kwaye kwaphantse kwenzeka okwesithathu eFlorida!):
Ubona isikhangiso kwi-Craigslist kwaye ubiza ukuba ubone isithuthi.
Udibana kwindawo yokuhlala yangasese. Umthengisa uthela ingoma kunye nomdaniso malunga nokuba kutheni imoto, ungalokothi ukhankanye ukuba bangumthengisi.
Ingxelo yomlando wemoto iya kuboniswa ukuba ikhutshwe naluphi na ukusola malunga nemoto esetyenziswayo.
Nangona kunjalo, ungumthengi wezithuthi ezisetyenzisiweyo, ngoko ke uceba ukuhlolwa okuzimeleyo nangoko. Oku kuhle kumthengisi kuba ukuhlolwa akukho nto ukuchaza ukuba ngubani umniniyo wangoku.
Ingxelo yembali yemoto yetshenzisiweyo ayikho ubuqhetseba nganye . Kusenokwenzeka ukuba ithathelwe phambi kokuba umthengisi athenge imoto - ngoko ukuthengiswa kwempahla kumthengisi akuyi kubikwa.
Ukuba uthanda imoto emva kokuvavanya , wenza idibanti kunye nalo mthengisi wangasese okhuseleyo uyavuma ukufumana imoto ebhaliswe kuwe. Xa ufumana iphepha lokugqibela, lityhila ukuba umthengisi wayenjalo "Imoto eYilwayo" okanye into efanayo.
Kutheni umthengisi efuna ukwenza oku?
Njengoko kubhaliwe kwiwebhusayithi ye-Federal Trade Commission ye-FTC yasebenzisa i-Rule Car Car ifuna abathengi ukuba bafake isiKhokelo sabathengi kuyo yonke imoto esetyenziswayo ekuthengiseni.
Isikhokelo sabathengi sinika ulwazi oluninzi, kuquka:
ingaba isithuthi sithengiswa "njengokuba" okanye ngewaranti;
yiyiphi ipesenteji yokulungisa iindleko zomthengisi uya kuhlawula phantsi kwewaranti;
into yokuba izithembiso ezithethileyo zinzima ukunyanzelisa; kwaye
iinjongo ezinkulu kunye nezombane kwimoto, kuquka ezinye zeengxaki ezinkulu omele uzikhange.
IsiKhokelo sabathengi sikuxelela ukuba:
fumana zonke izithembiso ngokubhaliweyo;
Gcina isiXhosa seBathengi ukubhekisela emva kokuthengiswa; kwaye
Cela ukuba imoto ihlolwe ngumatshini ozimele phambi kokuthenga.
Njengoko i-FTC ibonisa ukuba, "Ukuthenga imoto evela kumntu ozimeleyo kuyahluke ekuthengeni kumthengisi. Kungenxa yokuba ukuthengisa kwangasese ngokubanzi kungagqitywanga yi-Used Car Rule, okanye" ngeengqinisiso ezichaziweyo "zomthetho karhulumente. mhlawumbi iya kuba "njengaye" - uya kufuneka uhlawule nantoni na eyenzekayo emva kokuthengisa. "
Njengoko uqikelele ngoku, umthengisi wemoto oyisebenzisayo unokuphephelela ezininzi iintloko kunye neendleko ngokuzibiza njengomthengisi wangasese . Kwakhona akunakwenzeka ukulandelela izikhalazo ezibhekiselele kwi-Business Bureau kuzo.
Ngendlela, oku akukhawulelwanga kwi-Craigslist nje kuphela, ndiqinisekile, kodwa ndiyichaza loo ndawo kuba kuzo zonke izihlandlo ezintathu ndiyazi ukuba ukuthengiswa kwaqalile kwisayithi esikhangwayo sesikhangiso samahhala.
Lam icebiso? Yenza imbali yakho yemoto kwiyiphi imoto esetyenziswayo ngaphambi kokuba uyithenge. Cinga ukusebenzisa iisayithi ezimbini okanye ezintathu kuba akukho nendawo enye eya kubamba yonke into.
Ungaze uthembele kwingxelo yomlando wemoto eyasetyenziswe ngumthengisi (kunye nomthengisi othengisiweyo). Ndiphe amaminithi angama-30 kwaye ndakudala ingxelo yembali yokujonga imoto engabonakali nengozi kunye nobunikazi bhinqa elidala elivela ePasadena kuphela eliqhuba imoto kwicawa ngeCawa.
Ndifikile kwisigqibo sokuba kufuneka ufune ilayisenisi yokuqhuba okanye esinye isiqinisekiso esisemthethweni kumthengisi wakho ngaphambi kokuthenga imoto esetyenziswayo. I-Google igama lomntu kunye namazwi "asetyenziswa imoto." Khangela ukuba kukho into ephakamileyo. Hamba kude ne-deal xa uthe wenza. Ukusetyenziswa kweemoto ezinqwenela ukuthanda ukuhamba ukusuka kummandla ukuya kummandla emva kokugwetywa kodwa amanqaku e-intanethi ngokuqhelekileyo ayawalandela.
Qinisekisa ukuba ilayisenisi yokushayela ifana negama kunye needilesi kwi-bill bill yokuthengisa. Iyakumisa iingxaki ezinjengezo zidweliswe ngasentla.
Ngaphezu koko, khumbula ukuba ungavumeli umthengisi [ngaphandle kokuba uthengise umthengisi obhalisiweyo] ukuphatha iphepha lokubhalisa. Yileyo ndlela uphelile ngayo ekubanjweni kwindoda efana nelo ku-Craigslist.
Ukuba ufumanisa umthengisi uthengisa iimoto njengomntu wabucala, babike ingxelo kwi-arhente yelizwe efanelekileyo. Ngokucacileyo, bengabanini bezobuqhetseba abanikezelayo inkqubo.
Imoto endala esetyenzisiweyo okanye imoto entsha esetyenziswayo, yintoni engcono?
I-Mojo Motors ikhuthaza indlela efanelekileyo yokuthenga iimoto ezisetyenziswayo
Yintoni iBhangi loKhuseleko lwezeMboleki?
I-Fuel esebenzayo Imoto esetyenziswayo i-$ 8000- $ 10,000
Eyona ndlela ihamba phambili, inyanga ezimbi kakhulu ukuthenga iCar Used
10 Iimpawu Okufuneka Uzazi NgeCarMax
Indlela yokuSebenzisa iMbuyekezo yeRhafu yeNqwelo elisebenzisiweyo
Imibiko yabathengi ichaza imoto engasetyenzisiweyo kakhulu kwizigaba ezili-10
Iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokuFunda ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zithuthi
9 Iindlela ezigqwesileyo kwiSithombe Imoto esetyenzisiweyo yokuThengiswa
Iyiphi i-Jellyfish enkulu kakhulu?
I-Sarah Lawrence College I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
I-Bosu Ball Exercises ye-Bodybuilder
Yazi Umsebenzi Wakho kwiqela lakho le-Volleyball
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "uBenir" (ukusikelela)
I-Antigone's Monologue Ibonisa Ukunyaniseka
Mayelana ne-PAC - IiKomiti zoLuntu zezoPolitiko
Funda konke malunga nezibalo zeBhola kunye nale Mbali kunye neGlosari
Iingcebiso zoLwakhelo oluPhezulu lweeMpilo zokuNcedisa ukuNceda Uzuze kwaye uhlulwe
Iilwimi zesiJamani - imizekelo - iiVebhu eziqhelekileyo kunye ezingavumelekanga
I-Debra Lafave Case
Indlela yokuThambisa iIntlanzi ngokufanelekileyo
Phezulu 'Ii-80 zeengoma zeeNguqulelo
Uyazi ukuba ungumGymnast Xa ...
I-Inbee Park, Eyaziwa nangokuthi 'Winbee'
IiMidlalo zebhokisi ze-Olimpiki zeMigodi ye-Olimpiki
I-AP Physics 1 I-Information Information Exam